Gabar ka baxsatay nolosha Sucuudiga iyo waxa ay salka ku hayso - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gabar ka baxsatay nolosha Sucuudiga iyo waxa ay salka ku hayso
Waxay ahayd sheeko qabsatey caalamka gaalada oo farxad qaba halka caalamka Muslimka ay u ahayd murugo aan la soo koobi karayn waxaanse eegaynaa sababta ku kalifteyu gabadhaas yar si ay u heshoi gurmad gaalo inay tiraa waan ka baxay diinta.
Muslimiinta badankooda ayaa u fasirtey hadal ay ku badbaadinaysay nolosheeda maadaama ay gashay halkii ugu dambeysay una dhaxaysay geeri iyo nolol.
Raxaf Mohammed al-Qunun, oo 18 jir ah, ayaa dareenka ayaa la dareemi karaa inay ku jirto xilliga qof dhalinyarta ah uuna kala ogeyn noloshu waxay tahay lagunas shuban karo waxkasta, halisna ugu jiri laba xalo mid dooro. Waana xilliga ay kordhaan dareemada qofka bani-aadamka ee RABI ku beeray wiil iyo gabarba.
Raxaf nolol raaxo leh oo qofka bani-aadamka ahi jeclaysan kari ayay ku nooleyd, lacagta saliida oo farabadan, guri weyn iyo aaladaha dadku jecelyihiin inkastoo ay xaniban yihiin Wahaabiyada Sucuudiga.
Waxase ka maqnaa hal shay oo ah XORIYADA qofka bani-aadamka RABIGIIS siiyay rag iyo dumarba ee ah inuu isagu/iyadu ka tashado mustaqbalkeeda/kiisa ayadoo taageero ka helaysa kuwa ehelka u ah.
Waxase Raxaf ka horeysay laba gabdhood oo walaalo ah oo iyaguna ku guulaystey baxsadka waxayna ka sheekeeyeen sidii ay u baxsadeen iyo waxay ka soo baxsadeen iyo halista ay ku sigteen.
Is diyaarintii hore
Salwa waa 24 jir, walaasheedna waa 19 jir waxay bilowdey sheekada sidan soo socota.
Waxaan u baahnaa inaan aabbahay oggolaasho ka helo si aan u qaato baasaboor. Haweenka Sucuudiga meesha kaliya ee ay kali tagi karaan waa musqusha.
Nasiib-wanaag, kaar aqoonsi waan haystay sababtoo ah qoyskeyga ayaa ii oggolaaday in la i siiyo mar aan jaamacad dhiganayay. Waxaan sidoo kale haystay baasaboor sababtoo ah waxaa la i siiyay labo sano kahor mar aan u fadhiistay imtixaanka luqadda Ingiriiska.
Labadaas aqaoonsi markiiba waa layga qaaday hadana dib ayaan u helay. Waxaanan ku helay tuuganimo oo waxaan furaha ka xaday walaalkey.
Tan iigu darneyd ayaa hadda noqotey sidii aan ku bixi lahaa. Ma bixi karo waayo haddii lay qabto lagama yaabo in dib la ii arko. Waxaan go’aansanay inaan baxno xilli la hurdo. Waxaan aabahay oo hurda ka soo qaatey moobilkiisa, waxaan galay bogga wasaarada arimaha gudaha waxaanan lambarkiisa ku bedelay keyga.
Waxaan kale oo bogiisa wasaarada ka dalbey fasax ah inaan labadayadaba ka bixi karno dalka. Xilligu waa habeen la wada hurdo, gaari nalooma ogola waxaan dalbanay tagsi ay wadaan ajaanib iyagu waxba ka qabin in haweenaydu socon kartio kali.
Waxaan tagney garoonka, xilligana waxaan u dhaxayna nolol iyo geeri waayo haddii nala qabto way noo dhamaan lahayd.
Sanadkii ugu dambeeyay waxbarashadeyda, waxaan ka shaqeynayay isbitaal waxaana keysaday lacag igu filan inaan tigidh ku iibsado isla markaana aan ku helo dal-ku-galka Jarmalka.
Aabahay ayaa booliiska wacay markii uu ka war helay inaynaan guriga joogin, balse waxay ahayd xilli aan waxba laga qaban karin.
Markaan Jarmalka tegay, waxaan xitaa booliiska ka helay fariin aabahay ku socotay. Markaa Jarmalka aadneyd naxdintii weynayd welli way na fuushan tahay laakiin niyada aya noo degtay.
Waa lay qaabilay markiiba, waxaanan doortey Kanada waayo waxaan daawadey sida qaxootiga Suuriyiinta loo qaabiley iyo weliba Kanada oo aad ugu horeysa dhinaca bani-aadamninmada.
Hadda noloshayada waa farxad, xilligaan rabno ayaan baxnaa dharkaan rabno ayaan xiranaa, shaqadaan rabo ayaan ka shaqeeya aniga oo ah XOR. Sucuudiga jaamacad ayaan bartey waxaan fadhiyay guriga, waxana dhici lahayd inaan guur la’aan ku gaaro 35.
Hadaba aan dib u noqono ma diintaa ka masuula xoriyad la’aanta mise madhabyo la samaysto. Waxaanan ognahay in dinteenu cadahay laakiin dhibka ka jira wadamada carabta uu yahay dhaqan xun ay ku bixiyeen balaayiin dolar si ay u faafiyaan.
Tusaale Somaliya iyo Afghanistaan
Afganistaan xilligii ay ka talinaayeen dawladii shicibka ahayd waxay ahaayeen dad haweenkoodu haystaan xoriyad tan, markii Wahaabiyadu gashay sanadadii sideetamaadkii waxa haweenka loo geliyay dhar qufulan oo wejiga xataa qaybta indhaha shabakad bira ugu xiran tahay.
Sawirka hoose waa haweenka Afganistaan
Somaliya inkastoo haweenkeenu haystaan xoriyad kaamila oo ayna haysan haweenka Carabta Khaliijka hadana waxa wadaadada Wahaabiyada ee Sucuudigu biilo ka dhaadhiciyaan in wejiga dabooshaan, waxana dhaqankaas aad ugu faafayaa magaalooyinka dalka.
Waxa intaas loo raaciyaa in dharka madow mooyee dharkale mamnuuc yahay.
Sawirka hoose waa haween Somali ah
Dabcan Wahaabiyada Sucuudigu waxay ku bixiyeen hawlahan malaayiin doolar si dumarkooda u tusaan in sida loola dhaqmo sax tahay, wayse socon weyday waxayna keentay in wadada hadda ku furantey ay ku balaarato.
Isku soo duub waxa markasta fursad siiya gaalada waa habdhaqanka ka fog diinta ee ka yimaada ururada dimaha ee Carabta kuwaas oo ilaa hada galaaftey nolosha wadamada Afganistan, Ciraaq, Suuriya, Somaliya, kuwo kale.